ပန်းမာရ် ပြပွဲ (IX)(Pavilion of Future)Taipei International Flora Expo未來館 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ပန်းမာရ် ပြပွဲ (IX)(Pavilion of Future)Taipei International Flora Expo未來館
ပန်းမာရ် ပြပွဲ (IX)(Pavilion of Future)Taipei International Flora Expo未來館
Posted by zoe on Feb 28, 2011 in Arts & Humanities, Community & Society, Cultures, Events/Fundraise, History, News, Photography, Society & Lifestyle, Travel, World News |3comments
digital technology floor cooling systems Pavilion of Future solar panels Taipei International Flora Expo
ဒီပြခန်းကတော့ ရှင်း စဲန်းဧရီရာ ဇုံXinsheng Park Areaထဲမှာရှိပါ တယ် ။ ဒီပြခန်းကို Greenhouse အကြီးစားလို့သတ်မှတ် နိုင်ပါ တယ် ။ ဒီပြခန်းကို ခေတ်မှီ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ ultraviolet ray insulation, floor cooling systems, solar panels, နဲ့digital technology တွေ ကိုသုံး ပြီး အပူချိန် အမျိုးမျိုး ထိမ်းချုပ် ထား ပါ တယ် ။ ပြ ခန်းထဲက အပင်ရှစ်ဆယ်ရာနှုန်း ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် က ဖြစ်ပြီး နှစ်ဆယ်ရာနှုန်း ကတော့ ထိုင်ဝမ် ဒေသခံ အပင်တွေဖြစ်ပါတယ် ။
The Pavilion of Future isaphysical synopsis of Taiwan’s different geological environments. Here, visitors can see howapeaceful coexistence between the human race and plants plays out. The pavilion also inspires and creates hope forabetter tomorrow, in life and for the whole world. Natural light, air, energy (e.g. solar power), and the most sophisticated energy and digital technology available are used to present an innovative look at the digital, green life of the next generation.
The greenhouse zone is not onlyarecreational, aesthetically pleasing, and educational space, but is also used to house plant life from different climates around the world. Taiwan’s first intelligent, energy-conserving greenhouse usesacombination of ultraviolet ray insulation, floor cooling systems, solar panels, and other facilities to adjust indoor temperature.
Consolidation of the Pavilion of Future exhibitions makes up 80% of the Horticultural species and 20% of native and endemic species. More than 90% is used in Taiwan to product plants.
ဒီပို့စ်က ပုံတွေများတာမို့ .. မြန်မာပြည်ကလူတွေ..ကြည့်ရခက်တယ်နဲ့တူတယ်..။
ဒါတွေကြည့်ရတော့ ..မြန်မာပြည်ခမျာ ..ပန်းအလှတွေတော်တော်မရှိသေးပါလား ထင်မိတာပါပဲ..။
ပုံတွေ များ ပန်းတွေ များတော့ ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး ဟုံသွားလို့..
လှလှပပ ပန်းတွေ မြင်တော့ အိမ်မှာ ကောင်းကောင်း စိုက်ချင် စိတ်ပေါက်မိတယ်။
ဒီ ပြခန်း မှာ က ပန်း နဲ့အပင် ပေါင်း တော်တော် စုံလွန်း နေ တယ် ။ အ ပိုင်း A နဲ့B ထပ် ခွဲ ရ မ လိုဖြစ် နေ တယ် ။ သိတ် များ သွား တယ် ။